Ciyaartoydii ugu fiicnaa NBA ee abid: 30ka ciyaartoy ee ugu sarreeya - Ciyaaraha
30 -ka Ciyaaryahan ee ugu Fiican NBA ee Waqtiga oo dhan, ayaa la qiimeeyay
Doodaha ugu adag ayaa laga yaabaa inaysan ahayn kuwa muuqda.
Markii shaqaalaha Isboortiga ee Isku -dhafan ay bilaabeen inay isku daraan liiskan, kuma aanan murmin in LeBron uu u qalmo inuu ka sarreeyo MJ. Sidoo kale si gaar ah ugama aynaan shaqaysan sababta Tim Duncan, tusaale ahaan, uu ugu qalmay darajada 10 -ka sare Kevin Garnett iyo Kevin Durant (hadda).
Taa bedelkeeda, siyaasadaynta iyo weerarada yaryar ee midba midka kale sirdoonka kubbadda koleyga ayaa aad u kululaaday, wicitaanno badan oo Zoom ah iyo mawduucyo qoraal ah, markii aan isku daynay inaan si habboon u qiimeynno Shaq iyo Kobe iyo koox ilaaliyayaal ah xagga hoose ee 30 -ka Ciyaaryahan NBA ee ugu Wanaagsan Liiska.Waxay dammaanad qaaday inay heli doonto taageerayaasha kubbadda koleyga ee dareenkooda iyo, fikirkayaga hoose, waxay qabanayaan shaqo aad uga fiican qaar ka mid ah darajooyinka kale ee dul sabbayn doona interwebs -ka kuwaas oo sii ahaan doona magac la'aan.
Ku dhawaad ​​ilaa waqtigii kama dambaysta ahaa, waxaan ka doodnay in Shaquille ONeal, oo aan la mahdin karin mid ka mid ah ragga ugu waaweyn taariikhda NBA isla markaana khalkhal dhab ah ku ah maxkamadda, uu u qalmo in lagu qiimeeyo darajo ka sarraysa, Kobe Bryant weyn. ONeal wuxuu ahaa mid jir ahaan iyo tirakoob ahaanba ka duwan xarun kasta oo NBA ay aragtay. Laakiin intee in le'eg ayaad Bryant siineysaa inuu ku guuleystay siddooyin badan iyo inuu isbarbardhig sharci u sameeyay Michael Jordan?
Oo yaad siinaysaa noodhka saddexda ilaaliye halyeeyada halyeeyga ah - Chris Paul, Steve Nash, iyo Jason Kidd - marka uu hal qol u bannaan yahay? Maaddaama qof kasta oo ku lug leh dadaalkan aadka u adag ee lama huraanka ah u ololeeyay ciyaaryahanka ay u maleeyeen inuu u qalmo biil habboon, waxaan si dhaqso leh u ogaanay inay noqon doonto mid farxad leh marka la isku raacsan yahay. Waxaa jiray codsiyo xamaasad leh oo lagu miisaamayo guulaha aan hore loo arag ee ka sarreeya heer sare. Qaar kale waxay ku doodeen inay ku saabsan tahay tirooyinka iyo in abaalmarintu had iyo jeer ku dambayso lahaanshaha shaqsiga ugu mudan.
Dooddu waxay socon kartaa ilaa 30 -ka Luulyo, markaasoo NBA ay ugu dambayntii ku soo noqoto si ay noogu ducayso ciyaaro laakiin go'aaminta waa in la gaaraa ka hor wakhtiga kama dambaysta ah. Marka si ka sii wanaagsan ama ka sii xun, waa kuwan 30kii ciyaartoy ee ugu fiicnaa taariikhda NBA, oo si hagar la’aan ah loo qiimeeyay. Ku ammaan ama tiir xulashada sida aad u aragto inay habboon tahay. Qaarkood waxay jeclaan doonaan qiimeynta, kuwa kalena way neceb yihiin. Waan ku fiicnaa wixii aan la nimid inaan ogaano marka xigta ee aan cusbooneysiinno Kevin Durant wuxuu ku dhici karaa kan ugu sarreeya 10. Waxaa laga yaabaa in xitaa saaxiibkiisii ​​hore Steph Curry uu ku biiro. Kuwa kale, sida James Harden iyo Giannis Antetkounmpo, ayaa si aad u wanaagsan dib ugu bilaabi kara mudan tixgelin dhab ah, taasoo la micno ah in guurku uu hoos u dhigo laba halyeey. Dooddu weligeed ma dhimato oo halkan ayay u joogtay.
Waxaa iga xanaaqsan in dadku ay la yaabaan in Allen Iverson lagu daro liiskan. AI shaki la'aan waa kan ugu sarreeya 30 ciyaartoy NBA abid. Waa duurjoogta in ay xitaa dood tahay. Bal fiiri abaalmarinta. 11-jeer NBA All-Star. NBA MVP. Saddex-jeer Kooxda Koowaad All-NBA. Horyaalka gooldhalinta afar jeer NBA. Liisku wuu socdaa, laakiin saamaynta dhaqan ee Iversons ee hadda, iyo xitaa mustaqbalka, jiilka ciyaartooyda NBA ayaa ka macno badan lambarradiisa maxkamadda. waxay ugu yeereen pound-for-pound ugu fiican abid. Dwyane Wade wuxuu sheegay in AI ay qeyb ka tahay sababta uu u xirtay 3 intii uu ku jiray xirfadiisa. Waad sii wadi kartaa oo aad ka sii gudbi kartaa xiddigo hore iyo kuwa hadda ee NBA -ga oo ka hadlaya sababta Iverson aad ugu weynaa oo macno weyn ugu fadhiyo iyaga. Aniga naftayda, Ma iloobi doono Ciyaarta 1 ee Finalka NBA ee 2001. Illaa maanta taasi weli waa mid ka mid ah bandhigyadii shaqsiyeed ee ugu yaabka badnaa ee ka dhacay maxkamadda kubbadda koleyga oo aan waligay arkay. Waayo, nin baaxaddiisu tahay inuu ka baxo oo uu 48 ku tuuro waddada ka dhanka ah Los Angeles Lakers ee aadka loo jecel yahay waa mid aan la rumaysan karin. —ZF
Haddii aad la yaaban tahay sababta aan u leenahay ilaaliyaha dhibcaha oo yaraaday kaasoo ciyaaray dhammaan 19 -kii xilli ciyaareed ee waayihiisa ciyaareed ee Jazz ee ku jiray liiskan, waa inaan si dhab ah su'aal uga weydiiyaa IQ kubbadda koleygaaga. John Stockton waa NBA -yada mar walba hogaamiya caawinta iyo xatooyada; wuxuu ahaa 10-jeer All-Star, wuxuu sameeyay 11 koox oo dhan-NBA, wuxuuna ahaa shan jeer xulashada kooxda Difaaca oo dhan taasoo la micno ah in dib-u-socodkiisu uu ka dheer yahay qaab-dhismeedkiisa (su'aal leh) 61. Oo, haa, haa, ha ilaawin inuu xubin ka ahaa kooxdii ugu weyneyd ee abid la soo ururiyey: Kooxda Riyada ee 1992. Inaad ku dooddo sida Stockton, oo ah ku -soo -duwaha 2009 -kii galay Naismith Hall of Fame, uu yahay mid aan la mahdin karin inuu yahay mid ka mid ah ilaalada ugu weyn ee hesha hawl -karnimo. Maaddaama uusan ahayn mid dhalaalaya, inta badan waxaa loogu yeeri jiray wasakh, wuxuu xirtay gaagaaban gaagaaban, ma ahayn cayaaryahan isboorti, wuxuuna si weyn uga faa'iideystay inuu xirfadiisa oo dhan la ciyaaro Karl Malone, quruxdiisa si fudud ayaa loo illoobaa. Laakiin uma dulqaadan doonno wax hadal ah oo ku saabsan Stockton oo aan u qalmin heerka sare ee 30. —AAC
sida loo sameeyo isku darka keega cad
Dhaxalka Zekes ayaa xoogaa la soo dhaafay sanadihii la soo dhaafay fikradaha asxaabtiisa iyo arrimaha maxkamadda ka baxsan ee uu isagu keenay markii uu joogay xafiiska hore ee Knicks. Si kastaba ha noqotee, lama dafiri karo waxa uu ku sameeyay hogaamiyaha laba ka mid ah kooxaha horyaalnimada ugu neceb taariikhda NBA. Wiilasha Xun waxay dhibaato u geysteen NBA -da Quduuska ah ee Quduuska ah ee Magic Johnson, Larry Bird, iyo Michael Jordan inta ugu badan ee waxyeelladu gaartayna waxay ahayd amarrada ilaaha 61 -ka dhibcood. Detroit wuxuu ku guuleystay horyaal-gadaal-gadaal bartamihii waxa ay dad badani ugu yeeraan xilligii ugu adkaa ee kubbadda koleyga NBA wuxuu ka dhigay Jordan xoqin iyo calal sanado kahor intuusan ugu dambeyn ka helin Bulls. Thomas wuxuu ahaa jeneraal shaydaan ah oo awood u lahaa inuu goolal dhaliyo mar kasta oo uu doono oo kooxdiisana dhabarka u saaro doonista guusha. Wali wuxuu ku jiraa shanta caawin ee ugu sarreeya (wuxuu celcelis ahaan ahaa 13.9 apg 85) welina wuxuu ku hoos jiraa maqaarka MJs. Zeke oo aan ku jirin Kooxda Riyada ayaa ah snubkii ugu weynaa abid, buunbuunin ma leh. - KU
27. Kawhi Leonard
Runtii waxaa jira hal shay oo kaliya KawhiLeonard uu ka tagay si uu ugu guuleysto xirfadiisa. Taasi waa abaalmarinta MVP ee horyaalka, laakiin uma maleynayo inay tahay inaan u garaacno taas haddii taasi ka maqnaato resumeygiisa marka uu ugu dambeyntii ka fariisto. Wuxuu heystaa labada Ciyaaryahan ee Difaaca Sanadaha, labada Finalka MVPs, wuxuu gadaashiisa ku xardhay xaraashka isagoo u sii jeeda cinwaanka NBA, wuxuuna aad ugu guuleystay xirfadiisa oo dhan. Xilli ciyaareedkii uu la joogay kooxda Raptors ayaa isaga ku soo biirtay darajooyinkii oo dhan, haddii ay hufnaan lahayd, laakiin haddii aad haysato ikhtiyaarka saddexaad ama afaraad ee nidaamka Spurs ee isaga ka soo horjeedda, waa inaad sidoo kale tixgelisaa dhinaca kale - ka warran haddii uu helo furayaasha koox ka horreysa intii uu sameeyay? Sida iska cad, Leonards dib-u-bilaabashada xilli-ciyaareedka caadiga ah uma xoog badna sida kuwa kale ee liiskan ku jira dhaawacyo iyo ka mid ahaanshaha nidaamka Spurs-ka, laakiin bandhigyadiisa ciyaareed ee cayaaraha ayaa sigaar cabba dad badan oo liiskan ku jira. Waxaan u malaynayaa in Kawhi ay ku dhammaan karto xadka 15-20 marka la wada sheego oo la sameeyo, laakiin tani waxay umuuqataa meel cadaalad ah oo lagu bilaabi karo. LIKE DHEH
Ugu yeer falcelin xad dhaaf ah waxaad rabto oo dhan, laakiin dhammaan abaalmarinnada iyo shirkadda uu hadda hayo ka dib dhacdadan xiisaha leh ee loo marayo Finalka NBA ee 2021, aad bay u adag tahay in laga reebo Giriigga Freak liiskaan. Madaxdii hore ayaa laga yaabaa inay ka xanaajiyaan inay dhigaan 26-sano jir, ka dib sideed xilli oo kaliya, halkaan in ka badan halyeeyo mudan, laakiin Antetokounmpo waa laba jeer xilli-ciyaareed joogto ah MVP, Ciyaaryahanka Difaaca ee Sanadka, oo kaliya kasbaday Finalka MVP ee ugu horreeya ayaa sharfaya ka dib markii uu si murugo leh u qorey waxqabadkii ugu weynaa ee ciyaar dhow oo aan waligeen arag. Hes wuxuu sameeyay shan kooxood oo All-NBA ah, afar jeer ayaa loo magacaabay mid ka mid ah kooxaha NBAs All-Defense, wuxuu ka mid yahay All-Star MVP, wuxuuna ahaa Ciyaaryahanka Sannadka ugu Hormarsan Sanadkii 2017. Wiil dhallinyaradan loo malaynayo inuusan lahayn abaalmarino badan oo ku saabsan dib -u -dejintiisa, gaar ahaan ka dib markii uu galay horyaalka sida mashruucaas oo kale. Laakiin hadda oo uu kasbaday horyaalkiisii ​​ugu horreeyay, Antetokounmpos wuxuu galay hawo kacsan. Hubaal, ciyaartiisu godad bay leedahay, oo kuwa neceb Bucks ayaa odhan doona orodkii ay u galeen horyaalka waxay ahayd neecaw. Si kasta oo ay tahay, ma dafiri kartid sida ay ugu xoog badan yihiin weerarada Giriigga Freak uu ku jiro rinjiga, sida cajiibka ah ee daafaca uu uga shaqeeyay inuu noqdo, iyo sida dhiirrigelinta safarkiisa uga soo baxay ilmo caato ah oo ku yaal Athens ilaa xiddiga NBA. In yar oo ka mid ah horyaallada ayaa si aad ah u saameeyay ciyaarta dhinac walba sida Antetokounmpo oo kale, xitaa haddii 3-dhibic dhibic waligeed ay sii ahaato shaqo socota. Garaac dhammaan waxaad rabto, laakiin si fiican u naso oo ogow Antetokounmpo ayaa iska leh halkan wixii aan marqaati ka nahay hadda. —AAC
Toosh! Waa inaanu jirin wax naxdin leh oo Dwyane Wade ka soo degay liiskan. Wuxuu leeyahay horyaal NBA oo saddex jeer leh NV Finals MVP, 13-jeer NBA All-Star, xubin toddoba-jeer ah All-NBA, saddex jeer xubnaha kooxda Difaaca oo dhan, wuxuuna leeyahay hal horyaal oo NBA ah oo ah cabbir wanaagsan. Markii uu Wade ku soo dhacay goobta 2003 -dii isla markiiba waxaa caddaatay inuu yahay ciyaaryahan gaar ah. Laga soo bilaabo dunks-ka duulaya oo sare u kacaya ilaa ka-bood-boodyada dhexda ku jira ee been-abuurka ah ee D Wade bamka been abuurka ah, waxaa jiray daqiiqad ka dib markii No. In kasta oo Wade uu u soo ciyaaray Bulls iyo Cavs mustaqbalkiisa ciyaareed, had iyo jeer cadaabta waxaa lagu xusuustaa inuu xubin ka ahaa Miami Heat. Daqiiqadihii uu ku bixiyay South Beach wuxuu ku noolaan doonaa sumcad xumada kubbadda koleyga. Fagaaraha Biscayne wuxuu had iyo jeer degi doonaa Degmada Wade.- ZF
Way ka badan tahay sidekick kaliya inaad ogaato qofka, weynaanta Scottie Pippens waxaa si murugo leh u qaatay dad badan, oo ay ku jiraan kuwa ku arkay labadoodaba indhahooda iyo kuwa ku saleynaya qiimeyntooda kaliya waxay ku arkeen Qoob -ka -ciyaarka Dambe . Laakiin waligaa ha iloobin wixii GOAT, Michael Jeffrey Jordan, uu noogu sheegay dokumenteriga: Qof walba wuxuu yiri waxaan ku guuleystay horyaalladaas oo dhan, laakiin kuma guuleysan Scottie Pippen la'aanteed waana sababtaas sababta aan ugu tixgaliyay saaxiibkaygii ugu fiicnaa abid. Haddii aadan ogeyn, hadda waad taqaanwwwwww… .Liib -bixiyaha lambarada ayaa laga yaabaa inaysan weligood ku yaabin maxaa yeelay ma ahayn dhaliyaha Jordan. Marna ma samayn wax u wanaagsan sida Urdun — marka laga reebo, yacnii, difaac. Pippen waa muran la’aan mid ka mid ah daafacyadii ugu weynaa taariikhda NBA isagoo sameeyay 10 koox oo Difaac ah (8 xulashada Kooxda Koowaad) 17-kii sano ee uu ku jiray xirfadiisa wuxuuna si joogto ah u caburiyay ciyaartoygii ugu fiicnaa sida aysan waxba ahayn. Xubin Kooxda Riyada ah iyo laba jeer ku guuleystay bilada dahabka oo xirfad u lahaa in loo tixgeliyo mid ka mid ah 50-ka Ciyaaryahan ee ugu Wanaagsan NBA-da 1996, Pippen wuxuu sameeyay wax ka badan celcelisyadiisa (16.1 PPG, 6.4 RPG, iyo 5.2 APG) . Ciyaartiisa isku -dhafan, sida Magic Johnsons, waxay ahayd waqti kahor. In kasta oo uu weligiis ku noolaan doono hooska MJ, kuwa dhabta ahi waxay og yihiin in Urdun uusan u kicin xaaladda Zeus iyada oo aan Pippen samaynin dhammaan shaqada wasakhda ah oo u soo baxay inuu noqdo ciyaaryahanka dhammaystiran ee dhammaystiran.- AC
23. Muuse Malone
Halyeeyga dhifka ah ee ku soo booday NBA -ga intii uu ku jiray horyaalnimada, ogow in Malone oo u ciyaaraya toddobo franchise oo kala duwan ee Ururka waa inuusan ka mashquulin xaqiiqda ah inuu si fudud uga mid yahay xarumaha ugu wanaagsan abid. Saddexda jeer MVP iyo 1983 Finals MVP wuxuu ahaa 13-jeer All-Star, sideed-jeer xulashada All-NBA, iyo mashiinka dib-u-soo-kabashada ficil ahaan lama barbar dhigin 70-yadii iyo 80-meeyadii. Lix jeer Malone, oo lagu naanayso Guddoomiyaha Guddiyada, ayaa NBA ku hoggaamiyey dib-u-soo-noqosho iyo 14 xilli oo toos ah, wuxuu celcelis ahaan laba-lambar ka nadiifiyaa galaaska. Kaliya sideed ciyaartoy oo taariikhda NBA ah ayaa ku guuleystay saddex ama in ka badan abaalmarinno MVP ah Malonena ma gaadho meel u dhow jaceylka Larry Bird iyo Magic Johnson - labada ciyaartoy ee kale ee ku guuleysta saddex MVPs - ay helaan. Waxaad heshay taas sababtoo ah Shimbirta iyo Sixirku waxay ka hadlayeen waxayna asal ahaan badbaadiyeen NBA -da 80 -meeyadii. Hoolka Kubbadda Kolayga ee Naismith ee Fame inductee 2001, Julius Erving wuxuu soo bandhigay saaxiibkiisii ​​hore kahor khudbaddii qoritaanka Malones Dr. Waa inuu caan noqdaa. Maxaa magac lumis ah haddii uusan samayn. Malone wuxuu magacaas ka dhigay mid la mid ah dib -u -soo -kabashada, guuleysiga, iyo ugu dambayntii, dhimashada. AC
Elgin Baylor waligeed kuma guuleysan giraan. Laakiin sababta oo ah Baylor farsamo ahaan waligiis kuma guuleysan horyaal 14 -kii sano ee uu la joogay Lakers, oo laba ka mid ah uu ku qaatay Minneapolis, ha u oggolaan daruurahaas sida cajiibka ah ee uu u ahaa xoogga weerarka iyo musharraxa GOAT intii lagu jiray horyaallada maalmihii hore. Lambarka 1-aad ee guud ee 1958 NBA Draft, Rookie of the Year ee 1959, 11-jeer All-Star, iyo layaab leh 10-jeer xulashada Kooxda Koowaad All-NBA, Baylor in ka badan intii ku noolayd buuqii markii uu horyaalka galay oo uu ka tagay celcelis ahaan 27.4 dhibcood iyo 13.5 dib -u -ciyaar ciyaar kasta. Wuxuu ahaa hal -abuur weerar leh, ciyaartoygii ugu horreeyay taariikhda NBA ee ku shubta 70 dhibcood ciyaar, si aan muran lahaynna wuxuu hoos ugu dhici doonaa mid ka mid ah cayaaryahannada ugu wanaagsan. Naismith Hall of Famer inductee oo aan caqli-gal ahayn 1977-kii, waxa kaliya ee ka maqnaa dib-u-habeyntiisu waxay ahayd horyaal. Farsamo ahaan, Baylor wuxuu kasbaday mid tan iyo markii uu ka mid ahaa kooxdii Lakers ee 1971-72 oo ku guuleysatay dhammaantood, laakiin wuxuu ciyaaray kaliya 9 ciyaarood xilli ciyaareedkaas, isagoo si fiican uga fariistay ka hor inta aan la bilaabin isreeb-reebka sababtoo ah dhaawac jilibka ah oo soo gaaray markuu ahaa 37 jir. u tixgeli Baylor inuu yahay horyaal ama maya, ogow in mid kale oo aan dhimanayn oo liiskan ku jira uu u malaynayo in Baylor u qalmo dariiqooyin ka badan inta uu helo. Yaan u malaynayaa inuu ahaa kan ugu weyn? Oscar Robertson mar la weydiiyay. Tani waxay kugu yaabi kartaa: Elgin Baylor. Waxaan jeclahay inaan arko qaar ka mid ah ciyaartooyda waaweyn ee maanta ka hor imaanaya Elgin. Way ilaalin kari waayeen. Qofna ma awoodin.- AC
Admiralka. David Robinson waa karti jiil run ah oo soo galay lambarka 21 ee liiskayaga. Taasi runtii waxay ku tusaysaa sida ay u adag tahay in darajooyinkaas loo kala sarreeyo. Horyaalka NBA oo laba jeer qaaday, NBA MVP, 10-jeer All-Star, NBA Defensive Player of the Year, afar-jeer Kooxda Koowaad ee All-NBA nin ma dillaaci karo 20. gaadho meeshan, oo waxaad isbarbar dhig ku samaynaysaa ciyaartoy aad u waaweyn iyo ciyaartoy aad u sarreeya, asal ahaanna u eg timo kala qaybsan. Xaaladda Robinsons, weynaantiisu waligeed ma ifin, laakiin joogitaankiisa iyo ciyaartiisu waxay gacan ka geysteen kicinta boqortooyadii San Antonio Spurs, taas oo dabcan uu sii waday Tim Duncan. Robinson wuxuu ahaa nin run ahaantii wax walba sameeyay, tirooyinkiisuna waxay taas caddeeyeen. Robinson wuxuu celcelis ahaan ahaa 21.1 PPGand 10.6 RPG laba-laab ah xirfadiisa intii uu kor u qaadayay 3.0 BPGintii hawsha. Taasi waa mid cajiib ah. Kaliya maahan tirooyinka Robinsons heer sare, laakiin wuxuu keenay isboortiga booska dhexe oo dhif iyo naadir loo arkay waayihiisii. Admiralku wuxuu awooday inuu wax walba sameeyo ka dibna qaar.- ZF
Dr. J wuxuu ahaa weligiis Michael Jordan kahor Michael Jordan. NBA -da waxay ku biirtay ABA 76 sababtuna waa Dhakhtarka (waxaa jiray koox kale oo sida George Gervin oo kale oo playerstoolike ah) wuxuuna sii waday inuu qaado horyaal kale duufaan kadib markii uu laba chips kula guuleystay shabakadaha ABA. Wuxuu ka caawiyay Sixers inay sameeyaan Finalka inta lagu gudajiray xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay NBA -da casriga ah, laakiin wuxuu lumiyay Bill Waltons Blazers lix kulan. Dr. J wuxuu dul sabbaynayay hawada markii addimmadiisii ​​laf -wareenka ahaa ay jarka ka jareen oo timihiina dabayshu ka dhacday. Waxaan qiyaasi karaa oo kaliya sida shiribku dib u eegay maalmahaas. Waxay u badan tahay sida daawashada shisheeyaha. Mararka qaarkood waxaan daawadaa dib -u -dhigistiisa inta lagu gudajiro rubuc afaraad ee Ciyaarta 4 ee 1980 -kii Finalka ee ka dhanka ah Lakers andtry si aan u ogaado sida cadaabta uu awood ugu yeeshay inuu hawada ku sii dheeraado. Sidoo kale ma aha dhammaan qaabka iyo jilicsanaanta. Tirooyinka xirfadaha ee soo -baxa ayaa la mid ah riwaayadihiisa. Wuxuu celcelis ahaan ahaa 24.2 PPG, 8.5 RPG, 4.2 APG, 2.0 SPG, iyo 1.7 BPG. Wuxuu kaloo sameeyay 11 koox NBAAll-Star wuxuuna ku guuleystay seddex abaalmarin oo MVP ah NBA iyo ABA. Dr. J waa aabbaha NBA -ga Casriga ah. - KU
Karl Malone wuxuu ku dhacaa liis dheer oo ciyaartoy ah oo 90 -meeyadii runtii aad u wanaagsanaa laakiin aakhirkii hadheeyey Michael Jordan iyo Chicago Bulls. Malone, tani xitaa waa ka sii badan tahay sababta oo ah labadiisii ​​guuldaro ee NBA Finalka ee MJ iyo shirkadda. Sidaas oo ay tahay, Malone waa lambarka 2 -aad ee gooldhalinta taariikhda NBA wuxuuna celcelis ahaan 25.0 PPG ku qaatay 19 -kii xilli ciyaareed ee uu horyaalka ku jiray. Wuxuu ahaa laba jeer NBA MVP, wuxuu kasoo muuqday 14 ciyaarood oo All-Star ah, wuxuuna kooxda Koowaad ee All-NBA ka dhigay 11 jeer waalan. Lambarada dhammaantood waxay muujinayaan in Malone ay si fudud u tahay 20 ciyaartoy ee ugu sarreeya taariikhda NBA. Xirfadiisu waxay had iyo jeer ku xirnaan doontaa guuldarooyinka si loogu guuleysto giraan, laakiin wax soo saarku had iyo jeer wuxuu u jiray Malone. ZF
Kahor intaan loo aqoonin Logo -ga, saaxiibbadiis waxay ugu yeeri jireen Mr. Clutch. Jerry West wuxuu ahaa toogashadii halista ahayd ee kubbadda - 47.4 boqolkiiba oo aan macquul ahayn xirfadiisa - wuxuuna hawlgab noqday ka dib xilli ciyaareedkii 1974 oo galay kaalinta 5 -aad ee ugu sarreysa dhibcaha la dhaliyey, dhibcihii ciyaar kasta, tuuristii xorta ahayd, iyo caawinta. In kasta oo la aaday sagaal NBA Finalka Lakers, West waxay ku guuleysatay hal horyaal oo kaliya 1972. Laakiin mid ka mid ah ilaalada ugu weyn ee abid sameeyay kooxda Xiddigaha mid kasta oo ka mid ah 14-kii xilli ciyaareed ee uu ku sugnaa Los Angeles, wuxuu sameeyay 12 kooxood oo All-NBA ah, wuxuuna ahaa shan-jeer xulashada Difaaca oo dhan. Galbeedka ayaa si sharci ah u sameeyay dhammaantood, oo ay kujirto hogaaminta horyaalnimada gooldhalinta xilli ciyaareedkii 1969-70 iyo caawinta intii lagu gudajiray kaligiis horyaalnimada. Hubaal, wuxuu la ciyaaray qaar ka mid ah halyeeyadii Lakers iyo rikoorkii 1-8 ee Finalka ayaa taagan. Laakiin sida uu ugu fiicnaa xilli-ciyaareedkii caadiga ahaa, Galbeedka ayaa ka soo iftiimay isreeb-reebka. Wuxuu celcelis ahaan qaatay 30 jeer ama ka badan toddoba jeer, oo ay ku jirto 40.6 dhalanteed ah 11kii kulan ee 1965. Qaabka uu ciyaaryahan walba u helo marka la barbar dhigo Michael Jordan maalmahan, waa sidaas sidii ay West ugu soo laabatay 60 -meeyadii iyo 70 -meeyadii. Wuxuu ahaa halbeegga dahabka ah oo gabi ahaanba u qalma in loo tuuro astaanta horyaallada, xitaa haddii uusan si qarsoodi ah u ixtiraamin sharafta. AC
Weli darajo kale oo adag. Qeybtaan liiska waxaa ku jira rag badan oo halyeeyo waaweyn ah oo ka soo jeeda taariikhda NBA, laakiin Dirk ayaa ugu dambeyntii soo degay No. 17 sababta oo ah qaabkii uu ciyaarta u beddelay. Dirk ka hor, marar dhif ah ma aragtay 7-cagood oo NBA ah oo ka soo bilaabaya qoto dheer. Hadda uun fiiri NBA -da maanta. Haddii kooxdaadu aysan haysan nin weyn oo ka toogan kara 3, waxba kuma guuleysanaysid. Dirk wuxuu keenay isbeddel asal ahaan wax ka beddelay sida NBA loo ciyaaro. Dhammaan saamayntaas oo dhan, tirooyinka Dirks iyo abaal -marinta ayaa kor u qaaday booskiisa liiskan. Wuxuu hoos uga dhacay 30,000 oo dhibco xirfadiisa, wuxuu ku guuleystay abaalmarinta NBA MVP, wuxuu saftay 14-xiddigood oo dhan, wuxuuna kor u qaaday sharafyo kale oo aan tiro lahayn xirfadiisa. In kasta oo tani aysan ahayn wax kasta oo muhiim ah, haddana Dirk wuxuu awooday inuu ku sameeyo isla xayeysiiska xirfadiisa oo dhan. Anigana xitaa ma xusin siduu sixir u ahaa intii lagu jiray Finaladii NBA -da 2011 markii Mavs -kiisu ka xumaaday LeBron James iyo Miami Heat. U dhiib Dirk ubaxyadiisa.- ZF
Waa waalan yahay in Chuck hadda hoos loo dhigay. Dadku waxay iloobaan inuu sanado xukumayey isagoo ah 66 awood weeraryahan. Wareegga Mound -ka ee Dib -u -soo -noqoshada wuxuu ahaa bahal ku yaal looxyada, celcelis ahaan 11.7 xirfadiisa xitaa sanadihii hoose ee Houston. Barkley sidoo kale si xun looma joojin karin, isagoo ku garaacay Jordan 93 MVP wuxuuna u kaxeeyay kooxdiisa cusub Suns Finalka halkaasoo uu kaga adkaaday Jordans Bulls lix. Chuck wuxuu ciyaaray si ka weyn sidii uu ahaan jiray wuxuuna ahaa mid aad uga ciyaar badan sidii loo arkay. Bilowgii xirfadiisa wuxuu ahaa mid ka dhaqso badan kana xoog badan dadka kale, laakiin markii uu weynaaday wuxuu awooday inuu ku daro ganaax badan ciyaartiisa. Barkley wuxuu bilaabay inuu J-ing dadka kor u tuuro oo uu toogto saddex, taas oo ku khasabtay dadka ka soo horjeeda inay waardiye ka qabtaan maxkamadda oo dhan oo aysan ahayn oo kaliya barxadda. Wuxuu had iyo jeer ahaa mid ka mid ah ciyaartoydii ugu madaddaalada badnaa garoonka iyo dibaddaba, taasoo u horseeday inuu noqdo martigeliyaha istuudiyaha ku guuleysta Emmy Award Gudaha NBA . Jiilalka soo koraya waxay ku raaxaystaan ​​Chuckster siyaabaha ay taageerayaasha NBA -da hore u malayn waayeen. Adiga, ogow inaysan wali jirin ciyaartoy isaga oo kale ah. - KU
Shaqii ilaalada dhibcaha. In kasta oo Diesel ay burburtay difaacyadii, Steph ayaa sii ballaarisay, iyada oo qaadatay falsafadda 3-da dhibcood ee Mike DAntoni oo u rogtay laba darajo. Difaacyadu waa inay ku sii sugnaadaan isaga maxkamad-buuxda, taas oo gacan-ku-hayntiisa iyo ka-soo-bixitaankiisu ay suurtogal ka dhigi waayaan. Jahannamo ayaa markaa ka soo jiidanaysa badhkeed oo ka dhig 43.5 boqolkiiba waqtiga. Isaga, shaki la’aan, waa toogashadii ugu weyneyd taariikhda ciyaarta. Wuu ka fariisan karaa maanta oo wuxuu waltz geli karaa Hall of Fame. Marka la barbardhigo inta badan ragga ku jira liiskan, in kastoo, Curry wuxuu ahaa mid si tartiib tartiib ah u bilaabay. Waxa uu lahaa arrimo ku saabsan anqawyadiisa horaantii mihnadiisa taasoo nagu qasabtay inaan sugno si aan u aragno weynaanta aan aragnay muddadii uu ku jiray kulliyadda Davidson. Taageerayaasha Warriors waxay ku ooriyeen milkiilaha cusub ee Joe Lacob habeenkii Chris Mullin Night maxaa yeelay wuxuu kooxda siiyay Steph ka dib markii uu taageere Monta Ellis ka iibiyay Andrew Bogut. Gobolka Golden wuxuu ku guuleystay horyaalkoodii ugu horreeyay muddo afar sano ah saddex sano kadib. Hadda waa MVP -kii ugu horreeyay ee la isku raacsan yahay taariikhda horyaalnimada (oo aad u nacasnimo badan, laakiin weli) oo leh saddex siddo oo lagu raaco MVP kale. Horey u aragtay saamaynta Stephs ee carruurta kubbadda kolayga waxay bilaabaan inay si qoto dheer uga bilaabaan xirfaddooda da 'yar iyo horyaal kooxaha NBA oo dhexda ka boodaya meel daaqsin ah oo si buuxda u qabsanaya 3-tilmaame. Curry si fudud waa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu saameynta badan si loo xiro. - KU
Tigidhka Weyn waa mid ka mid ah ciyaartoydan halka convo siddooyinku ay ku hayaan wax yar oo aan miisaan lahayn. Wuxuu ka caawiyay in la beddelo booska hore u sii wadidda awoodda xitaa in ka badan intii uu Tim Duncan sameeyay (waa xarun!), Haddana waxaan dareemayaa inaan la ixtiraamin sababtuna waxay ahayd sannadahaas oo dhan oo kooxo dhexe dhabarka ku siday Minnesota. Haddii uu diyaariyay Spurs, KG wuxuu lahaan lahaa wax ka badan hal giraan magaciisa. Waxaa hadheeyay Duncan, oo tirooyinkiisu xoogaa ka roon yihiin, laakiin Garnett ayaa aad ugu xiiso badnaa daawashadiisa. Xirfadihiisa gaarka ah ee weerarka ah, waxay ku jirtay dhammaadka difaaca halkaas oo KG uu ugu fiicnaa. Wuxuu ku guuleystay Ciyaaryahanka Sannadka ee 2008, isla sannadkaas wuxuu ku guuleystay horyaalnimadiisa kaliya ee Boston wuxuuna sameeyay kooxda Difaaca oo dhan 12 jeer. Sida Magic Johnson oo isaga ka horreeyey, Garnett wuxuu kor u qaaday waxa nin nin baaxad leh ku samayn karo maxkamadda. Xaqiiqdii, waxay ahayd Sixir inuu qaabeeyey cayaartiisa markii uu yaraa, taas oo horseeday in KG uu noqdo mid ka mid ah ragga ugu waaweyn ee NBAhas abid arkay. - KU
Aniga ahaan, Kevin Durant waa cayaaryahankii weerarka ugu xirfadda badnaa ee abid ciyaaray ciyaarta. Waxa uu leeyahay 7 waardiye. Ma jiraan wax qaacido ah oo lagu joojin karo. Wuxuu haystaa xirmo weerar oo buuxa oo aan lahayn wax daciif ah. Wuxuu ka toogan karaa meel kasta oo ka mid ah maxkamadda, wuxuu ku gaari karaa geeska siduu doono, oo haddii aad ku dambayso inaad la tartamto xabaddiisa malaha wax macno ah ma leh maxaa yeelay si sahal ah ayuu kugu toogan karaa. KD ayaa kaliya celcelis ahaan ka hooseysa dhibcaha 25 ciyaar kasta ONCE 12 -kii xilli ciyaareed ee uu ku jiray ololihiisa rookie. Wuxuu u tegey koox Dagaal-yahanno ah 73-9 oo leh MVP laba jeer ah iyo toogashadii ugu weyneyd abid ee Steph Curry wuxuuna ka dhigay Robin. Waxaad ugu yeeri kartaa mas, koob, ama wax kasta, laakiin ma diidi kartid tirooyinka si joogto ah ayaa loo soo saaray. Haddii uu horyaal kale u keeno Brooklyn, waxaa laga yaabaa inuu riixo 10 -ka ugu sarreeya dhammaadka xirfadiisa. LIKE DHEH
Hakeem Riyada Olajuwons ka mid noqoshada qaybtan liistada uma baahna sharraxaad dhab ah. Wuxuu leeyahay abid weyn oo ka mid ah ragga ugu waaweyn ee abid ka ciyaara horyaalka. Waad ku wareegi kartaa Hakeem oo kaliya wuxuu ku guuleystay labadiisa horyaal ee NBA halka Michael Jordan uu howlgab noqday, laakiin haddii aad sidaas sameyso, ma fahmin sida ay u adag tahay ku guuleysiga horyaalnimada. Hakeem ma ahayn oo kaliya MVP labadii kulan ee NBA Finalka, laakiin wuxuu sidoo kale gurigiisa qaatay MVP horyaal 1994, wuxuu ka soo muuqday 12 ciyaarood oo All-Star ah, wuxuuna hogaamiyaa NBA-yada mar walba hogaamiya baloogyada 3,830. Awood dhab ah oo ka jirta labada dhinac ee kubbadda, weli waa la yaab in la daawado waxyaabihii hore ee muhiimka ahaa oo la arko sida Olajuwon u suurogashay inuu u dhaqaaqo rinjiga ciyaartoy cabbirkiisa leh. Xitaa ka sii yaab badan macnaha guud ee xirfadda Hakeems ayaa ah inuu waxaas oo dhan sameeyay halka rag waaweyn ay ku ordeen NBA (meel ka baxsan Michael Jordan). had iyo jeer u mahadnaq Hakeem Olajuwon.- ZF
In kasta oo aan ku doodi karno habeen iyo maalinba qiimaha sedex-laablaha ee ciyaarta booska-ka-yar ee maanta, markii Oscar Robertson uu noqday cayaaryahankii ugu horreeyay taariikhda NBA ee celcelis ahaan saddex-laab labanlaaban hal xilli ma ahayn wax weyn. Ilaalada barku ma ahayn inay ahaadaan 65 mashiin oo dhibcaha dhaliya kuwaas oo baaldi ka heli kara meel kasta oo ka mid ah maxkamadda sida The Big O heli karto. Sidoo kale lama filaynin inay habeennimadii dumin doonaan looxyo laba lambar leh. Laakiin Robertsonbroke wuxuu caariyay ku dhawaad ​​20 sano kahor Magic Johnson wuxuu saftay kulankiisii ​​ugu horreeyay. Wuxuu celcelis ahaan celcelis ahaan saddex jibaarmay xilli ciyaareedkiisii ​​rookie ka hor ololihiisii ​​sumcadda lahaa xilligii 1961-62 markii uu ku fiicnaa 30.8 PPG, 12.5 RPG, iyo 11.4 APG habeen. Dhammaanteen waan ognahay Russell Westbrook, LeBron James, iyo ugu yaraan sacab muggiis oo xiddigo kale ah ayaa khalkhal gelin kara oo heli kara saddex-laab ficil ahaan markasta oo ay rabaan. Laakiin kaliya Westbrook ayaa soo saartay celcelis xilliyeedka (saddex jeer) si ay ula jaanqaado Robertsons brilliance iyo Russ ma ahan meel u dhow juggernaut Robertson. The Big O wuxuu ahaa ciyaar qarow ah maxaa yeelay wuxuu u dhaliyay qaabab aad u yar oo ay awoodaan inay ogaadaan. 1964 NBA MVP, Rookie of the Year 1961, 12-jeer All-Star, iyo 11-jeer xulashada All-NBA… Waan sii wadi karaa. Xirfadiisa kuliyad ahaan waa mid aan la barbar dhigi karin, laakiin tan iyo markii ay ka hadlayeen kubbadda koleyga xirfadleyda halkaan ogow in uu ahaa ciyaaryahanka kaliya ee aan ahayn Wilt Chamberlain iyo Bill Russell oo ku guuleystay MVP intii u dhaxeysay 1960 iyo 68. Waxa kale oo uu kaalin weyn ka qaatay NBA -da aasaasidda wakaaladda xorta ah markii wuxuu keenay dacwad ka dhan ah horyaalkii 1970 -kii oo ka hor yimid sharcinimada horyaalada la soo jeediyay in lala midoobo ABA, mudnaanta qabyada, iyo qodobka keydka oo ka hor istaagay ciyaartoydu inay qandaraas la galaan koox kasta oo ay rabaan. - AC
Haddii aad taqaanid taariikh -nololeedka Big Fundalsals markaas waxaad ogtahay fikradda ah inuu noqon doono mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan kubbadda koleyga waa wax laga xumaado. Duncan wuxuu ku koray Jasiiradaha Virgin ee Mareykanka. Wuxuu ahaa dabbaal mana uusan bilaabin ciyaarista kubbadda koleyga ilaa markii dambe ee uu ahaa dhallinyaro. Ka dib afar sano oo uu joogay Wake Forest, wuxuu ku soo booday hibo jiil oo koox kasta oo argagax leh intii lagu jiray xilli-ciyaareedkii 1996-97 ay rajaynaysay inay soo degi doonto si uu keligiis dib ugu noqdo hantidoodii. Spurs way soo baxeen, waxay qoreen Timmy, waxayna noqdeen boqortooyo quasi ah. Shan cinwaan oo NBA ah, saddex MVP oo Finalka ah, laba MVPs oo joogto ah, 15 All-Star Games, 15 All-NBA iyo xulashada kooxda Difaaca oo dhan ka dib, Duncan wuxuu la ciyaaray San Antonio dhammaan 19-kii xilli wuxuuna si joogto ah u dhigay lambarro sida uu ahaa robot - oo leh shakhsiyadda, sida ay warbaahinta u muujisay, si loo waafajiyo. Hubaal, Duncan wuxuu aad uga faa'iiday inuu ka garab ciyaaro halyeeygii David Robinson iyo Hoolkii Famers Tony Parker, Manu Ginobli, Pau Gasol, iyo Kawhi Leonard. Laakiin marka laga reebo Leonard, Duncan wuxuu ka soo dhalaali doonaa dhammaan ciyaartoydii waaweynaa ee weligood u soo ciyaaray Spurs - iyo awood kasta oo kale oo horay u soo marta taariikhda NBA - sababta oo ah sida dhagaxa uu u ahaa mid adag. Isagu waa 10ka ugu sarreeya mar walba dib-u-soo-noqoshada, xannibaadda, ku guuleysta saamiyada, iyo saamiyada guulaha difaaca. Haa, dhaawacyada ayaa hoos u dhigay dhowrkii xilli ciyaareed ee u dambeeyay, laakiin ololihiisii ​​Rookie of the Year intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 97-98 illaa xilli ciyaareedkii 2009-10, Duncan wuxuu ku fiicnaa laba-laab. 251 ciyaarood oo isreebreeb ah, wuxuu celcelis ahaan ahaa 19.9 PPG iyo 11.0 RPG. Waa heerkeeda ugu sarreysa ee ka caawisa kor u qaadista Duncan in ka badan kuwa awoodda jireed iyo kuwa cayaaraha hibada leh ee hore sida Karl Malone iyo Kevin Garnett. Laakiin hab -dhaqankiisa aamusan, sharafta leh ayaa ku kasbaday ammaanta ugu badan. Tababaraha Spurs Gregg Popovich ayaa si fiican u sheegay markii maaliyaddu ay ka fariisatay maaliyadda Duncans. Waxaad u maleyneysaa in Kawhi Leonard uusan hadlin wax badan, Popovich ayaa yiri. Wax baan ku odhan lahaa isaguna wuu eegi jiray. Ma hubo inuu dheg jalaq u siinayey… ugu dambayntii waxaan garwaaqsaday inuu fahmay wax kasta oo aan sheegayay. Waxay u badan tahay inay ku raacday badhkeed, laakiin wuxuu ahaa mid ixtiraam badan oo uusan waxba odhan ilaa goor dambe. Ka dib markay wax soo saaraan, Pop wuxuu inta badan u oggolaadaa Duncan inuu haysto. Ma ku doodi karaa natiijada .- AC
Ma rabtaa inaad ka hadasho wax aan la qiimayn? Bill Russell aad baa loo xushmeeyaa marka uu ka hadlayo kuwa waaweyn. Kaliya maahan inuu yahay guuleystaha ugu weyn dhammaan isboortiga Mareykanka, Russell sidoo kale waa labada ciyaartoy ee ugu caqli badan uguna wanaagsan difaaca waligiis soo qaatay kubbadda koleyga. Sida Kareems skyhook, Biilasha ayaa u xeel dheer inay kubbadaha ku ciyaaraan ka dib xannibaaddu waa farshaxan lumay maadaama ciyaartoydu doorbidi lahaayeen inay ku dhejiyaan tarbuunka oo ay ku dhejiyaan qofka ka soo horjeeda halkii ay ka dhigi lahaayeen ciyaar sax ah. Ciyaartiisa saxeexa ee kubbadda u garaacista saaxiibkiis ayaa ka caawisay inuu hindiso nasashada degdegga ah. Xannibaadaha iyo xatooyada ayaan la sarreynin markaa, laakiin waxaa jira cilmi-baarayaal sheeganaya Russell celcelis ahaan meel kasta inta u dhexeysa 8-12 baloog ciyaar kasta. Kaliya maahan inuu Russell ku guuleystay 11 horyaal oo NBA ah, labadii ugu dambeysay waxay ahaayeen ciyaartoy-tababare oo aan laga adkaan Ciyaartii 7-aad, waxay ku socdeen 10-0 markii ay badisay ama tagtay waqtigii gurigeeda. Wilt Chamberlain ayaa liiskan ku jira darajo sare maxaa yeelay tirooyinkiisu aad bay u qosol badan yihiin, laakiin wuu garaaci kari waayay Bill xitaa iyadoo Jerry West iyo Elgin Baylors caawiyaan. Ciyaaryahanka kaliya ee taariikhda ugu dhow inuu la mid noqdo guushiisa waa Michael Jordan. Ciyaartoydu ma doortaan waayihii ay ku ciyaarayeen, waxa kaliya ee aan sameyn karnaa waa inaan eegno cidda xukuntay. Mana jiro qof ku jira liiskan oo u dhow wixii uu Russell ka qabtay. Waa sababta sababta NV Finals MVP loogu magac daray isaga. Runtii wuu ka horeeyey waqtigiisii. - KU
ciidanka cirka 1 labiska cad ee hooseeya
8. Chamberlain Wilt
Qaar naga mid ah ayaa diyaar u ah inay ku dhintaan Wilt Chamberlain Belongs ee NBAs Mt. Rushmore hill maxaa yeelay qofna ma beddelin ciyaarta sida Wilt the Stilt sameeyey. MAYA. JIRKA. Dhab ahaan, waxay sameeyeen xeerar ay isku dayaan inay ku xaddidaan awoodiisa maadaama uu haysto diiwaanka ma jiro ciyaartoy hadda ama mustaqbalka waligiis u dhowaan doona inuu madoobaado. Yaa kale oo u socda celcelis ahaan 50.4 PPG xilli sida Wilt sameeyey 1961-62 xilli? Ma jiraa qof kale oo celcelis ahaan 22.9 RPG inta lagu guda jiro xirfadiisa sida Wilt sameeyey? Yaa waligiis 100 dhibcood heli doona ciyaar sida Wilt sameeyey? Miyaad ii sheegaysaa dadka qaarkood celcelis ahaan in ka badan 45.8 daqiiqo ciyaar kasta sida Wilt sameeyey 13kii xilli ciyaareed ee NBA? Nafna waligeed uma dhowaan doonto 23,924 xirfadiisii ​​dib -u -dhiska. Tim Duncan, oo ah kii ugu fiicnaa dib-u-soo-kabashada cayaaraha la arkay tan iyo Moses Malone iyo Kareem Abdul-Jabbar, ayaa ku dhammeystay 9,000 oo loox oo ka dambeeya Chamberlain inkastoo uu ciyaaray shan xilli ciyaareed oo ka badan halyeeygii lothario. Naceybka ayaa ka hor imaan doona in Wilt ay la ciyaartay koox adag sanadihii 60 -meeyadii iyo 70 -meeyadii markii fikradda ah in xarun 71 ay noqon karto cayaaryahanka ugu cayaaraha badan maxkamadda la keydiyay buugaag maadi ah. Laakiin waxaad awood u yeelan kartaa oo kaliya tartanka hortaada ah NBA -na waxay ku dadaaleysay inay xukunto The Big Dipper markii kuwa ka soo horjeedaa aysan awoodin. Sababtoo ah xukunka Chamberlains, horyaalku wuxuu ballaadhiyey haadka, ciyaartoy la mamnuucay oo dib u soo ceshaday tuuritaannada xorta ah ee la seegay ka hor inta aysan kubaddu taaban geeska, beddelin qeexidda gooldhalinta weerarka, oo ay ka mamnuucday soo-gelinta xad-dhaafka dambiisha maxaa yeelay waxay ahayd waddo-toos ah oo toos ah waqti. Jordan waxaa laga yaabaa inuu yahay GOAT, horyaalkuna runtii wuxuu beddelay qaar ka mid ah sharciyadiisa markii uu toosay, laakiin MJ Marna ma beddelin buugga qaanuunka sida Chamberlain sameeyay.- AC
7. Shimbir Larry
Bostons waxay lahayd wax ka badan saamigeeda caddaaladda ah ee Hall of Famers oo ku duudduubtay Beertii hore ee Boston, laakiin qofna ma ahayn sidii gooldhaliye dilaa ah ama sidii xajin dhammaadkii cayaaraha sida Larry Legend. Seddex jeer oo ku guuleysatay seddex MVPs oo isku xigta bartamihii 80-meeyadii, Bird ayaa garaacday toorriyo sidii wax aan jirin oo wuxuu jeclaa inuu jeexo quluubta kuwa la tartamaya isagoo ka hadlaya qashinka ugu liita. Mid ka mid ah waxa ugu weyn ee haddii taariikhda NBA ay ku wareegsan tahay Shimbiraha gadaal oo uu si xun u dhaawacay markii uu hooyooyinkii waddada u jeexay intii lagu jiray xagaagii 1985. Haddii Shimbirku uusan ahayn Mr. isla markaa wixii ka dambeeyay si xun ayuu u liqay sanadihii ugu dambeeyay ee horyaalka. Laakiin kama hor istaagin inuu celcelis ahaan noqdo 24.3 PPG iyo 10.0 RPG 13 -kii xilli ee uu joogay. Shimbirku wuxuu buuxiyey dhibcaha sanduuqa laakiin marna si adag ugama ahayn nin tirooyin ah - wuxuu ahaa uun guuleyste sameeya baasas qosol leh, wuxuu lahaa karti uu ku arko wax walba oo ilbidhiqsiyo ka horreeya qof kasta oo kale maxkamadda, wuxuuna had iyo jeer sameeyaa ciyaarta muhiimka ah ee midkood heshiis ama fure u ah socod qeexaya ciyaarta. Taasi waa sababta inkasta oo uu si dhib yar u heli karo dabacsanaan ku filan si uu u ciyaaro dhamaadka xilli ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay, Bird wuxuu ka mid ahaa xubnihii ugu dabaaldegga badnaa kooxda Halyeeyga Riyada. Ma jirin hab kooxdii kubbadda koleyga ee ugu weyneyd ee la soo ururiyey ay uga tagi lahayd weeraryahankii yaraa ee ugu weynaa ee ciyaarta waligeed la yaqaan. Shimbiraha waxaa beddelay qof kale oo ku jira liiskaas khuraafaadka ah, laakiin Hick ka Faransiis Lick weligiis waa Legend.- AC
Kan Ugu Awooda Badan. Xukunka ayaa u muuqda sida tilmaanta kaliya ee lagu sifeeyo xirfadda Shaqs. Shaq waa mid ka mid ah halyeeyadii ugu xirfadda badnaa abid ee taabta kubbadda koleyga waxaanan wada aragnay fiidiyaha isaga oo MJ u karinaya hal-hal ka hor Ciyaarta Xiddigaha. Quruxda xukunka Shaqs ayaa ah inaad garan karto ka dib laba qooqan oo uu ku sigtay inuu kugu dhufto dhibic dhibicda boostada, laakiin kaliya ma joogsan doontid inaad joojiso xitaa haddii aad ogtahay inay soo socoto. Waxay ahayd mid baaldi ah ama mid xun. Waxaa laga yaabaa inaanan waligeen arkin 71, 365-poundbig oo ahaa qarax, orod, iyo dhaqso sida Shaq. Runtii wuxuu ahaa mid naxariis badan oo si fudud uga mid ah ciyaartoydii ugu madadaalada badnaa-garoonka dhexdiisa iyo dibaddaba-oo NBA waligeed aragtay. Ma jiri doono Shaq kale-.- LIKE DHEH
Aan marka hore sidan wax uga saarno: kani ma aha go'aan falcelin u ah Kobe Bryants. Aniga shaqsi ahaan waxaan u malaynayaa inay ixtiraamdarro tahay inaan ka tago Kobe Bean Bryant shanta ugu sarreeya liistada waqtiga oo dhan. Magic iyo Shaq waxay Kobe u caleemo saareen Laker kii ugu weynaa ee uu ka fariisto. Miyaanay taasi kuu sheegin wax? Waxaan ka hadli karnaa sida Kobe u saameeyay ciyaarta iyo dhaqanka kubbadda koleyga laakiin taasi xitaa ma ahan cabbir. Waxaan aragnaa guulo fara badan sida NBA MVP, 5-jeer horyaal, laba-jeer Finals MVP, 18-jeer All-Star, sagaal xulashada Kooxda Koowaad ee Difaaca, oo hadda ah hogaamiyaha afaraad, iyo wax la mid ah. Xitaa guulahaas oo dhan dadku waxay isku dayaan inay ku jebiyaan tirakoobyada horumarsan sida heerka isticmaalka iyo hufnaanta. Aniga ahaan, taasi gabi ahaanba waa nacasnimo nin weli ku guuleystey inuu ku guuleysto inta magac ama ka badan Bird, LeBron, Wilt, Magic, iyo Shaq. Runtii miyaad daawanaysay Kobe Bryant muddo 20 sano ah oo aad is dhahday, Hagaag miyaanuu ahayn mid hufan sidaa darteed uma malaynayo inuu aad u fiican yahay sida uu u sawiray? Warbaahinta bulshada waxay noqon kartaa barako iyo inkaar markaa fadlan ha ku iibsan wax aan micno lahayn in Bryant uusan u weyneyn sida uu ahaa. RIP Mamba.- LIKE DHEH
Markaad ka hadasho PG -yada ugu fiican taariikhda NBA, macquul ma noqon doonto inaan loo yeelan Magic Johnson lambarka 1. Liiskan, wuxuu ku soo degaa No. 4 guud ahaan iyo sabab wanaagsan. Sixirku wuxuu si fudud u beddelay ciyaartii kubbadda koleyga markii uu ku soo booday goobta NBA ee ka baxsan Gobolka Michigan sannadkii 1979. Ka feker sida ay cajiib u tahay in xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyey ee horyaalka, Magic uu bilaabay Ciyaartii 6aad ee Finalka NBA ee bartamaha wuxuuna hoos u dhigay 42 dhibcood. . Wuxuu ciyaaray dhammaan shantii boos ee ciyaarta wuxuuna u horseeday Lakers inay ku guuleystaan ​​horyaalkoodii ugu horreeyay muddo toban sano ku dhow. Tani waxay ahayd uun bilowgii Magic, kaasoo cabirkiisa, gebi ahaanba beddelay sida adduunka kubbadda koleyga u eegaan ilaalada. Lambarradiisa iyo abaalmarintiisu waxay u muuqdaan kuwo aan run ahayn sannadka 2020. Iyada oo shan horyaal, saddex MVPs, sagaal-jeer xulashada Kooxda Koowaad ee All-NBA, Magic hadone ee xirfadaha ugu wanaagsan taariikhda NBA. Iyo qaybta ugu fiican? Sixirku wuxuu ciyaarta ka dhigay mid madadaalo leh - taasi waa waxa ka dhigtay sixirka si qaas ah ciyaartoy ahaan. Isaga iyo Larry Bird waxay si macno leh u badbaadiyeen horyaalkii 80 -yadii, in kasta oo aysan ka duwanayn qaab -dhismeed ahaan ma jiro dood saamaynteedu ku lahayd ciyaarta kubbadda kolayga. kabtanka Showtime Lakers waa inuu si adag ugu daraa liiska 5 -ta NBA ee ugu sarreeya.- ZF
NBA-yada mar walba hogaamiya gooldhaliyaha iyo hal-abuurka toogashada ugu dhimashada badan taariikhda Ururka, Kareem Abdul-Jabbar wuxuu cirka isku shareeray 38,387 dhibco shaqo. Waxaa laga yaabaa, kaliya laga yaabee LeBron James inuu ka sarreeyo isaga afar ama shan xilli oo kale, laakiin waxay qaadan doontaa dadaal herculean ah oo ku saabsan qaybta The Kings si ay u beddesho xaruntii ugu weyneyd abid ee cimri -dhererkeedu uusan ficil ahaan la tartami karin. Adigu uma baahnid inaad ku guuleysato NBA Finals MVP abaalmarinno 14 sano ah, laakiin Abdul-Jabbar ayaa ku guuleystay. Wuxuu kasbaday kaliya sharaf kasta oo shaqsi ah oo xiddig weyn uu kasban karo, gaar ahaan lix MVP (mid ka badan Russell iyo Jordan) wuxuuna weli yahay ciyaaryahanka kaliya ee taariikhda horyaalka ku guuleysta MVP in kasta oo kooxdiisu aysan soo bixin isreebreebka. Isaga oo u kala qaybiyay Bucks iyo Lakers, Abdul-Jabbar wuxuu ku guuleystay saddex MVPs oo leh xayeysiis kasta iyo shan ka mid ah lixda siddo ee Los Angeles. 19-jeer Xiddigle ah oo 15 jeer ku dhammeeyay 5-ta ugu sareysa codbixinta MVP, wuxuu si fiican kuu badbaadinayaa inaad liis gareyso dhammaan abaalmarintiisa maxaa yeelay waxaad wareejin doontaa qaybtan wanaagsan #saacadaha. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ogaato waa in Cabdul-Jabbar uu yahay xarunta ugu weyn oo aysan xitaa ahayn dood. Bill Russell waxaa laga yaabaa inuu yeesho cinwaano badan, Wilt Chamberlain wuxuu lahaan karaa dhammaan diiwaanadaas lama taabtaanka ah, laakiin Abdul-Jabbar wuxuu si xun u yaqaan xirfadaha siyaabaha Russell uusan waligiis u noqon wuxuuna ka fariistay hogaaminta horyaal sagaal qaybood oo tirakoob ah iyadoo ay ugu wacan tahay awooda joogitaanka cajiibka ah ee Chamberlain uusan la jaan qaadi karin. Cabdul-Jabbar jidh ahaan uma xoog badnayn sida Wilt ama Shaquille ONeal ahayd, laakiin dheecaankiisu wuxuu ahaa wax gaar u ah qof cabbirkiisa weyn. Dhammaan dadka kale ee waaweyn waxay u sujuudaan Kabtanka. - AC
Adigoo ah qof shaqsi ahaan LeBron James u ah No 1 liiska shaqaalahooda ugu fiican NBA, tani waa mid sahlan in la qoro. Markaad ka fikirto LeBron James, waxaad si fudud uga fikirtaa weynaan. Laga soo bilaabo durdurkii ugu horreeyay wuxuu ku qaatay ciyaar NBA illaa iyo hadda, ma uusan sameynin wax aan ahayn inuu ku noolaado buuqii weynaa ee garbihiisa la saaray ee ka soo baxay dugsiga sare ee Akron, Ohio. LeBron kaliya kuma ekeyn buunbuuninta, laakiin wuu dhaafay. Oo runta ha ahaato, waxaad tahay qof aan caqli -gal ahayn haddii aadan u malayn inuu fursad u haysto inuu qaato lambarka 1 ee liiskan marka xirfadiisu dhammaato. Doodda Michael Jordan iyo LeBron James weligeed ma joogsan doonto, laakiin xaqiiqda ah in LeBronhas hore u gaadhay heerkan ayaa aad u yaab badan. Waxaan mari karnaa dhammaan tirooyinka iyo abaalmarinnada si aan u caddeynno sababta uu James u joogi doono halka uu ku jiro liiskan, laakiin runtii ma jirto baahi. Dhammaanteen waan ognahay waxa uu sameeyay oo sii wadi doono inuu sameeyo ugu yaraan dhowr sano oo dheeraad ah. Aniga ahaan, waxa xaqiijiyey booska James ee wada-hadalka MJ wuxuu ahaa waxqabadkiisii ​​2016-kii markii uu hoggaaminayay Cleveland Cavaliers oo ka soo laabtay 3-1 oo looga adkaaday kooxda 73-da ee ku guuleystay Golden State Warriors. Buuggayga, taasi waa guusha kaliya ee ugu weyn taariikhda NBA waana adkaan doontaa in la sarreeyo. Laga soo bilaabo hoos udhaca 41 ee gadaal-gadaal-gadaal ilaa xayndaabka Ciyaarta 7, LeBron wuxuu la simay 2016. Wuxuu gaaray diyaarad kale oo weyn oo kubbadda kolayga ah oo isaga iyo Urdun uun ay haystaan. Waxay neefsadaan hawo ka duwan tan inteena kale waana ok. Buugga LeBrons weli ma dhammaan oo wuxuu ku dari karaa dhowr cinwaan oo jidka ah, laakiin sidoo kale ma oggola in la iska indho tiro wax kasta oo laga qabtay xirfadiisa maxkamadda. Laga soo bilaabo furitaanka iskuul ku yaal magaaladiisii ​​si loo dhiso boqortooyadiisii ​​warbaahineed, LeBron wuxuu si joogto ah u sameeyay wax kasta oo aan ka filaynay isaga ka dibna qaar. RIYO run ah.- ZF
Intee in le'eg oo sharraxaad ah ayaad u baahan tahay halkan? Dabcan Michael Jordan waa No. 1 20 PPGand si aad u dhaliso 40-lagu daray ciyaar. RIYADA, su'aal ma leh. Laakiin waxaan wali ku xasuusinayaa inuusan waligiis ciyaarin Finalka Game 7 lix ciyaarood oo uu ku guuleystay abaalmarinta Ciyaaryahanka Sannadka ee Difaaca (88) oo ay weheliyaan shantiisa MVPs iyo lix Finals MVPs. Wuxuu ka ciyaaray heerka ugu sarreeya labada dhinac ee dabaqa iyo sida Bill Russell ka hor inta uusan si dhab ah u ogeyn waxa ay tahay inuu sameeyo si uu kooxdiisa uga caawiyo inay badiso maalin iyo maalinba. Jordan waligiis ciyaar ma uusan qaadin, wuxuu ahaa nin maan -gaab ah wanaag iyo xumaanba. Ninkaygii ayaa ilmeeyay markii uu dib u fiiriyay sida uu ula dhaqmay saaxiibbadiis. ESPN -yada Qoob -ka -ciyaarka Dambe waxay isku dayday intii karaankeeda ahayd inay ku koobto MJs ceejintii adduunka kubbadda koleyga welina ma aysan cadaalad samayn. Ma jiro waardiye waligiis xukumay horyaalkii sidiisa oo kale, taas oo gacan ka geysata kiiskiisa marka aad ku aragtid meesha ugu sareysa liiska qof walba. Marna ma jiri doono Michael Jordan kale. Guulaystaha, oggolaanshaha, kabaha, dhaxalka. Waxaas oo dhan wuu sameeyay wuxuuna hubiyay inaad wax ka ogaatay intii aad jidka ku jirtay. Dhammaantood wejigiisa dhoolla -caddeyn iyo sigaar la doonayo in la shido.- KU
Gabadha Bruce Lees waxay muujisay Niyad jab iyadoo ay ka muuqato Aabaheed
Infographic: Imisa qaylo ayaa ku jira Filimaanta Qaylada?
Kacitaanka Daawadayaasha Skywalker oo Dalbanaya Disney #ReleaseTheJJCut Iyada oo Xanta Agaasimaha ayaa la Degdegay oo Sabotaged
Regina Hall waxay iftiimisay iftiin cusub oo ku saabsan yaa qaniinay Beyoncé
Isku soo wada duuboo: Agaasimaha Kooxda Ismiidaaminta James Gunn ayaa ka hadlay Nabadoon iyo Khatar
alaabta carruurtu ku ciyaarto ee iibka kirismaska ​​ee weyn
cunto kariska vanilla ka xoq
cuntooyinka cake strawberry iyadoo la isticmaalayo strawberries barafaysan
sida loo xidho ciidanka cirka 1 dhexe
J.J. Abrams wuxuu qirtay Star Wars Sequel Trilogy inuu ka faa'iideysan lahaa qorsheyn dheeri ah
Star Wars: Rise of Skywalker iyo agaasimaha The Force Awakens iyo qoraaga J.J. Abrams wuxuu qirtay in saddex -geesoodka ugu dambeeyay uu isticmaali karo qorshe dheeraad ah.
Myles Garrett iyo Mason Rudolph waxay u muuqdaan inay heshiiyaan ka dib markii Browns garaaceen Steelers
Myles Garrett iyo Mason Rudolph ayaa u muuqda inay xaliyeen khilaafaadkooda ka dib ciyaartii Axadda iyagoo is gacan qaaday iyo is-dhaafsi kooban oo hal-hal ah.
Aad u kulul in la maareeyo Xiddigga Carly Lawrence ayaa na siiya cusboonaysiin muhiim ah oo ku saabsan Nolosheeda Jaceyl
Tartanka kaliya ee reer Kanada ee Netflixs Too Hot To Handle ayaa leh waxay la haasaawi jirtay qof muddo ka dib bandhigga, laakiin wax ayaa hadda is beddelay.